HTHA Series rano tony Close Control Air Conditioning Unit - China Ningbo Hicon Industry
HTHA Series rano tony Close Control Air Conditioning Unit
Main Endri-javatra ny rano tony Close Control Air Conditioning Unit 1. rano ity fanaraha-maso akaiky rivotra tony-javatra mampahalefaka tia maro tsy voatery fomba famatsiana rivotra, izany hoe: A) UF: hiverina sy ambony anoloan'ny famatsian; B) S: hiverina anoloan'ny / famatsiana; C) D: hiverina ambony sy ambany famatsian; D) ud: hiverina ambany sy ambony famatsian; E) Ub: hiverina indray sy ny tahirin ambony, izay mety mpanjifa fahafaham-po 'fepetra samihafa ho an'ny refrigeration; 2. Ampy fitaovana amin'ny hatsiaka nanakodia vy kobany izay efa tsaboina ny electrostatic price, ...
Main Endri-javatra ny rano tony Close Control Air Conditioning Unit
1. Ity rano tony fanaraha-maso akaiky ny rivotra-javatra mampahalefaka tia maro tsy voatery fomba famatsiana rivotra, izany hoe: A) UF: hiverina sy ambony anoloan'ny famatsian; B) S: hiverina anoloan'ny / famatsiana; C) D: hiverina ambony sy ambany famatsian; D) ud: hiverina ambany sy ambony famatsian; E) Ub: hiverina indray sy ny tahirin ambony, izay mety mpanjifa fahafaham-po 'fepetra samihafa ho an'ny refrigeration;
2. Ampy fitaovana amin'ny hatsiaka nanakodia vy kobany izay efa tsaboina ny electrostatic dipoavatra, ity rano ity fanaraha-maso akaiky ny rivotra tony-javatra mampahalefaka no tena manohitra ny harafesiny. Ny hafanana, ahitana Cooper fantsona sy hydrophilic aluminium Nampandamòka an'izany, tia miasa avo fahombiazana;
3. Io indostrialy aircon tony ny rano dia fitaovana iray azo antoka amin'ny lafiny rano-hafanana izay tia ny laconic rafitra;
4. Ny fitsipika removable kobany ho fikojakojana mora kokoa sy kely kokoa ny fotoana mandany;
5. Ny compressor sy ny fanaraha-maso akaiky ity tavoara feno fanaraha-maso ny orinasa A / C rafitra dia nitaingina an-trano tao amin'ny efitrano, tena mora ny maso foana;
6. condenser rehetra dia miraikitra amin'ny condensate takela-pahombiazana fisorohana izay mety leakage;
8. Amin'ny tsirairay ny vy penal padded amin'ny silencer cottons, orinasa io rivotra-tony mahatonga rafitra famerana mari-pana ambany be tabataba mandritra ny fandidiana. Ny fitsipika removable kobany manao ny fandinihana sy ny fikojakojana mora kokoa sy kely kokoa ny fotoana mandany;
9. Ny hafanana fanaraha-maso ny fametrahana mazava tsara dia 18 ℃ ~ 28 ℃, ± 1 ℃ sy ny fanaraha-maso ny fametrahana mazava tsara hamandoana 50% ~ 70%, ± 5% RH ~ 10% RH.
10. Io fanaraha-maso akaiky A / C fitaovana dia fitaovana amin'ny toetra electrode humidifier.
Ara-teknika masontsivana Rano tony Close Control Air Conditioning Unit
Unit modely HTHW- 18 25 30 35 45 55 65 90 120
hihena fahafahana KW 19.9 27.6 33.2 38,3 48.3 59,7 69,8 91,4 123,7
Dreninao rehefa hihena hery KW 6.1 Anarana 8.2 10.2 11.7 14.6 17,9 20.6 26.8 35,8
Electric fanafanana ① KW 9 15 18 22 27 33 39 50 68
Compressor karazana horonam-boky hermetic karazana
Refrigerant karazana R22
Refrigerant boky kg fantsona varahina + aluminium Fin
Fan karazana centrifugal feo ambany karazana
Air famatsiana boky M 3/ h 4100 5600 6600 7700 9700 12000 13600 17000 23000
Condenser karazana anaty akorany sy Tube karazana
rano mikoriana M 3/ h 4.3 6 7 8.3 10.5 13 15,2 19,7 28.6
Rano indray mitete tsindry kPa 32 34 35 36 26 33 36 38 39
Water sodina habe G1-1 / 2 " G1-1 / 2 " G1-1 / 2 " G1-1 / 2 " H2 " H2 " H2 " G2-1 / 2 " G2-1 / 2 "
Humidifier karazana electrode karazana
Fahan'ny herin'ny humidifier KW 3 3 6.1 Anarana 6.1 Anarana 6.1 Anarana 9.8 9.8 11,4 17.5
Humidity fahaiza- kilao / h 4 4 8 8 8 13 13 15 23
Rano sodina haben'ny humidifier φ1 / 2 "
Control karazana PCB
Temp fanaraha-maso isan-karazany 18 ℃ ~ 28 ℃ ± 1 ℃
Humidity fanaraha-maso isan-karazany 50 ~ 70% ± 5% RH ~ 10% RH
Air sivana H3 Kilonga karazana
Previous: Air-tony Close Control Air Conditioning Unit
Manaraka: Air Conditioning Unit for Computer Room
elektrika Enclosure Cooler
HSLFL Series tony ny rano anaty baoritra Air Conditio ...
Temperature avo Air Conditioning Unit